Kunezinkinga eziningi zenhliziyo. Ngokuvamile siyazifunda ngabo uma sikhathazekile ngento ethile, kodwa kunezimo lapho lesi sifo singabonakali ngaphandle isikhathi eside. Izimpawu zivela eminyakeni edlule, ngokuvamile kaningi ngokuzumayo, futhi zidale ukuwohloka okungazelelwe empilweni. Ngokuvamile, izifo ezingenakuqhathaniswa zibonakalisa ngokwazo emva kokuzikhandla okukhulu ngokomzimba, okungabangela ukuboshwa komzimba.
Iyini i-mitral valve ?
Ukuhamba kwe-valve mitral ukugobhoza kwe-valve yenhliziyo, okubonakala ngokubonakala kwesinye sezindiza phakathi kwamagumbi enhliziyo uma ivaliwe. Ngenxa yalesi siphambeko, enye ye-flaps eveziwe iphumela ekuvaleni okukhululekile kwamakamelo ezinkamelo zenhliziyo. Ngenxa yalokhu, inani elincane legazi kusuka e-ventricle libuyela emuva, futhi kusukela emithanjeni enkulu yegazi ibuyela ezingxenyeni ze-ventricles.
I-Mitral valve prolapse isici se-8% sabo bonke abakhileyo emhlabeni. Isisekelo se-valve mitral sinamagagasi amabili amancane aphakathi kwe-ventricle kwesokunxele ne-atrium efanele. Ama-valves axhunyiwe ngokuqondile yizingcingo odongeni lwangaphakathi lwe-ventricle kwesokunxele.
Ama-valve we-valve mitral asondele ngesikhathi sokuqedwa kwe-ventricles, evimbela ukuphuma kwegazi kusuka kwe-ventricle kwesokunxele ngqo kwi-atrium kwesokunxele. Ngokuphumula kwama-ventricles, ama-flap ekamelweni avuliwe, okwenza kube nomthelela omusha wegazi okwenziwe umoya okhiqiza kabusha i-ventricle engakwesokunxele. Abantu abaningi abahlushwa yi-mitral valve prolapse banamaphutha ekwakheni kwamagumbi amakamelo nezinhliziyo . Ukuguquguquka kubangelwa ukubunjwa okungalungile kwe-collagen, okuyinto ngenxa yalokho kuholela ekwandeni kwamagagasi nezinhliziyo zenhliziyo. Lesi sifo asiyona ingozi kuwo wonke umuntu, ngoba ezinye iziguli zizwa izimpawu ezihlukile ezivimbela ukuhlala ngokuthula, futhi ngezinye izikhathi zibangele ubuhlungu enhliziyweni. Kodwa abanye bahlala isikhathi eside, bengacabangi lutho.
Isizathu esiqondile salesi sifo (ukwehla kwe-valve mitral) akukhona. Ngokuvamile, lesi sifo sizuze njengefa futhi senzeke kwabesifazane abaneminyaka engama-19 kuya kwengu-40.
Izimpawu zesifo se-mitral valve
Ngokuvamile iziguli aziqapheli inkinga ekhona, ngakho-ke ungayinaki izimpawu ezinjengokuthi: ukukhathala okuvamile, ukuphazamiseka okunzima ngemithwalo encane noma ikhanda elibi kakhulu. Uma ungadluli uviwo ngesikhathi futhi ungenzi i-ultrasound yenhliziyo, okuzobonisa isimo sangempela samakamelo angaphakathi enhliziyo, ngokuzikhandla okukhulu ngokomzimba inhliziyo ayikwazi ukumelana futhi kuyoba khona ukuhlaselwa.
Kuzo zonke iziguli ezine-metral valve prolapse, kunezinto ezingavamile ohlelweni lwezinzwa olulawula isilinganiso senhliziyo nokuphefumula. Ngenxa yalokho, inani elingekho ngokwanele lomoya-mpilo lingena egazini, futhi, futhi, lingena emisipha, okuholela ekukhatheni njalo.
Ngokuvamile lapho egijima, isiguli sinenhliziyo esheshayo noma engavamile , ngokuvamile kaningi akuyona impilo esongelayo, kodwa uma umsebenzi womzimba uqhubeka, kungase kube nezinkinga ezizoholela ekuwohlokeni kwezempilo. Ngezinye izikhathi isiguli sinesifo esibi esifubeni, sidlula imizuzu eminingana.
Uma ukuhlukumeza kwamagagasi we-valve yenhliziyo kubalulekile futhi kuvele igebe phakathi kwabo, lesi sifo sibhekwa ngokuthi i-mitral valve ihamba ngokuphindaphindiwe. Uma lokhu kutholakala kutholakale, ukungenelela kokuhlinzwa kuyadingeka ukuze ugweme imiphumela embi yalesi sifo.
Ukwelashwa kwe-mitral valve prolapse
Kuziguli eziningi, asikho isidingo sokwelashwa okhethekile, ngoba lesi sifo singase sinyamalale ngesikhathi. Konke okudingayo ukuqhuba ucwaningo kanye ngonyaka. Kulabo abanezinkinga kulezi zifo, khetha ama-buta-blockers akhethekile: i-metoprolol, i-atenol noma i-propranol. Uma isigaba sesifo sinzima kakhulu, khona-ke baqala ukungenelela kokuhlinzwa.
Virus yezinambuzane: Izimpawu Nezokwelapha
Igciwane lesandulela ngculazi
Ukwelashwa kwama-Pink Leaves
Ukukopela samavoti "VC" ngaphandle izinhlelo ne-SMS: umkhonyovu noma bonke Chesney?